“သနပ်ခါးအပြည့်လိမ်းကာ ခွေးလေးနဲ့အတူ ဆော့ရင်း ပျော်မြူးနေတဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့သားလေး မြတ်သူ” - Cele Connections
“သနပ်ခါးအပြည့်လိမ်းကာ ခွေးလေးနဲ့အတူ ဆော့ရင်း ပျော်မြူးနေတဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့သားလေး မြတ်သူ”
နာမည်ကြီး မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသားမြင့်မြတ်ကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်..။ ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ပကာသနမရှိ နေထိုင်တတ်တဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့ အပြုအမူလေးတွေဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိစေတဲ့ အချက်တွေထဲက အပါအဝင်ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်..။ မြင့်မြတ်က ချောမောလှပတဲ့ ဇနီးရယ်.ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ပဲဖြစ်ပါတယ်..။
မြင့်မြတ်ရဲ့ သားလေး မြတ်သူဟာလည်း ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကျော်လေး တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ နေပါပြီ..။ အသားဖြူဖြူလေးနဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ မြင့်မြတ်နဲ့တူလွန်းလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ငယ်ငယ်လေးနဲ့ သိမ်းပိုက်ရရှိထားသူပါ..။ သနပ်ခါးလေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းတဲ့ မြတ်သူရဲ့ ပုံလေးတွေကို ဒီနေ့ ဧပြီလ (၂၀)ရက်နေ့မှာ မြင့်မြတ်ရဲ့ မန်နေဂျာရဲ့ အကောင့်ကနေ “Now. 1234…Myat Thu” ဆိုပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်..။
သနပ်ခါးအပြည့်နဲ့ အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ခွေးလေးနဲ့ အတူ ဆော့ကာ ပျော်မြူးနေတဲ့ မြတ်သူလေးကတော့ တစ်နေ့တစ်ခြား အဖေတူသားလေးဖြစ်လို့ နေပါပြီနော်ပရိသတ်ကြီး..။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းတဲ့ မြတ်သူလေးရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source:Myat Wai Tun’s Facebook
“သနပျခါးအပွညျ့လိမျးကာ ခှေးလေးနဲ့အတူ ဆော့ရငျး ပြျောမွူးနတေဲ့ မွငျ့မွတျရဲ့သားလေး မွတျသူ”
နာမညျကွီး မငျးသားတဈလကျဖွဈတဲ့ မငျးသားမွငျ့မွတျကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော..။ ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးကို ပီပွငျအောငျသရုပျဆောငျနိုငျပွီး ပကာသနမရှိ နထေိုငျတတျတဲ့ မွငျ့မွတျရဲ့ အပွုအမူလေးတှဟော ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုတှကေို ရရှိစတေဲ့ အခကျြတှထေဲက အပါအဝငျဖွဈမယျ ထငျပါတယျ..။ မွငျ့မွတျက ခြောမောလှပတဲ့ ဇနီးရယျ.ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သားလေးနဲ့အတူ ပြျောရှငျအေးခမျြးတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားသူပဲဖွဈပါတယျ..။
မွငျ့မွတျရဲ့ သားလေး မွတျသူဟာလညျး ခဈြဖို့ကောငျးလှနျးလို့ ပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးကြျောလေး တဈယောကျဖွဈလို့ နပေါပွီ..။ အသားဖွူဖွူလေးနဲ့ ဖခငျဖွဈသူ မွငျ့မွတျနဲ့တူလှနျးလို့ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတှကေို ငယျငယျလေးနဲ့ သိမျးပိုကျရရှိထားသူပါ..။ သနပျခါးလေးနဲ့ ခဈြဖို့ကောငျးလှနျးတဲ့ မွတျသူရဲ့ ပုံလေးတှကေို ဒီနေ့ ဧပွီလ (၂၀)ရကျနမှေ့ာ မွငျ့မွတျရဲ့ မနျနဂြောရဲ့ အကောငျ့ကနေ “Now. 1234…Myat Thu” ဆိုပွီး လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ မြှဝလောခဲ့ပါတယျ..။
သနပျခါးအပွညျ့နဲ့ အိမျမှာမှေးထားတဲ့ ခှေးလေးနဲ့ အတူ ဆော့ကာ ပြျောမွူးနတေဲ့ မွတျသူလေးကတော့ တဈနတေ့ဈခွား အဖတေူသားလေးဖွဈလို့ နပေါပွီနျောပရိသတျကွီး..။ Cele Connections ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး ခဈြဖို့ကောငျးလှနျးတဲ့ မွတျသူလေးရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျမြှဝေ ပေးလိုကျပါတယျနျော။
“(၂၆)နှစ်ပြည့်တဲ့မွေးနေ့လေးမှာ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ Surpriseလေးတွေကြောင့် အံသြဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်မိတယ်ဆိုတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ”
“မူလီလေးတွေ ကြွေလွင့်သွားအောင် အမိုက်စားဈေးဗန်းခင်းလိုက်တဲ့ မူးလာ”
“သူမတို့အဒေါ်အိမ်နားမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ တွေ့ရှိပြီး သူမအိမ်နဲ့လည်း မဝေးတာကြောင့် စိုးရိမ်နေတဲ့ ကြည်ဖြူသျှင်”